बाजुराको स्वामिकार्तिक खापर गाउँपालिका गठबन्धनको विपक्षमा
२०७९ बैशाख ०३ गते शनिबार नजिक न्युज संवाददाता
सोही क्रममा बाजुराको स्वामिकार्तिक खापर गाउँपालिकामा पनि भागबण्डा नमिल्दा नेपाली काग्रेसले गठबन्धनबाट बाहिरीने निणर्य गरेको छ । नेपाली काँग्रेस स्वामिकार्तिक खापर गाउँपालिकाको बैठकले गठबन्धनमा नजाने निणर्य गरेको बताइएको छ ।
बाजुराका ४ पालिकामा एमालेका उम्मेदवार सर्वसम्मत, ५ पालिका उम्मेदवारको टुंगो प्रदेशले लगाउने
पार्टी जिल्ला कमिटी र शिर्ष नेताहरु सहीतको छलफलको निर्णय बारे पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी गराउने बताएपनि सहमति नभएका गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख उपप्रमुखको नाम प्रदेश कमिटीमा सिफारिस गरेको पार्टी सचिव भरत थापाले बताएका छन् ।
भागवण्डा नमिल्दा बाजुरा गठबन्धनमा सहमति जुटाउनै सकस
गठबन्धन जोगाएर चुनावी सहकार्य गर्ने तीन दल बीच सहमति भएपनि भागवण्डामा कुरा नमिलेको श्रोतको दाबी छ । नेपाली काँग्रेसले बाजुराका स्वामिकात्र्तिक खापर गाउँपालिका र जगन्नाथ गाउँपालिका बाहेकका ७ वटा पालिकामा प्रमुख उपप्रमुख दुबै पद आफूले पाउनु पर्ने दाबी गरेको छ ।
धनगढीमा गठबन्धनलाई एमालेको भन्दा स्वतन्त्रको डर !
२०७९ बैशाख ०२ गते शुक्रबार नजिक न्युज संवाददाता
स्थानीय नेतृत्वले भने आ आफ्नो दाबी राखेका छन् । नेपाली कांग्रेसले मेयर र उपमेयर दुवैमा दाबी गरेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि उपमेयरमा दाबी नछाड्ने बताएको छ भने नेकपा एकीकृत समाजवादीले सबै पदमा उम्मेद्वार सिफारिस गर्ने, तर बाँडफाँटमा लचक हुने नीति लिएको छ ।
बाजुरामा चुनावी गठबन्धन गर्न काँग्रेस, माओवादी र समाजवादी सहमत
२०७८ चैत २९ गते मङ्गलबार नजिक न्युज संवाददाता
भोलि तीन दलका तर्फबाट सयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्ने गरी स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर जाने लिखित निर्णय सहीत सहमति गरेको नेपाली काँग्रेसका सहसचिव एवं कार्यदल सदस्य कुृष्णराज पाध्यायले बताएका छन् ।
ओलीको टिप्पणी : माओवादीको भाँडो रित्तिसक्यो, बिर्को मात्र छ
‘माओवादी कुनै पार्टी रहेन, केन्द्र रह्यो । केन्द्र छ, अरु केही छैन,’ उनले भने, ‘माओवादीको भाँडो रित्तिसक्यो, बिर्को मात्र छ । त्यही बिर्कोलाई उनीहरुले केन्द्र छन् । दुई चार जना नेता छन्, अधिकाशंले छोडिसके ।’
मेयरको टिकटमा प्रतिनिधिसभा सदस्यको दाबी
तर उनले फेरि मेयरको टिकट दाबी गरेकी छन् । एमालेकी केन्द्रीय सदस्य र सप्तरी जिल्ला सह इन्चार्जसमेत उनले भनिन्, सबारेमा मैले दुई वर्ष अगाडिदेखि नै ठाउँ ठाउँमा कुरा गर्दै आएकी छु । केन्द्रीय नेताहरुलाई पनि मैले आफ्नो विचार राखेकी छु ।’
एमालेले वैशाख ९ गते स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणापत्र जारी गर्ने
वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले घोषणापत्र र पतिवद्धता जारी गर्दा स्थानीय तह र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा गरिने प्रतिवद्धताहरुको फरक ठाउँ भएकोले छ्यासमिस गर्न नहुने बताए ।
एमालेको धनगढी नगर इन्चार्जमा भट्ट
एमालेको जिल्ला कमिटी सचिवालयको आज बसेको बैठकले उनलाई उक्त जिम्मेवारी दिएको हो। उनी एमालेका जिल्ला सदस्य तथा कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका सभापतिसमेत हुन्।
काँग्रेसको धनगढी नगर कार्यसमिति कोषाध्यक्षमा भट्ट
नेपाली काँग्रेस धनगढी नगर कार्यसमितिले भट्टलाई कोषाध्यक्षमा नियुक्त गरेको हो। लोकतान्त्रिक ईञ्जिनियर्स एशोसिसयनमा आबद्ध भट्ट राजेन्द्र निर्माण सेवाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) र आरवी कन्सल्टेन्सीका प्रबन्ध निर्देशक हुन्।
राष्ट्रपतिद्वारा स्थानीय निर्वाचनमा सेना परिचालन गर्न स्वीकृति
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको १७ चैतको सिफारिस र मन्त्रिपरिषदको २४ चैतको निर्णय अनुसार सेना परिचालनका लागि राष्ट्रपतिले स्वीकृति दिएको राष्ट्रपति कार्यालयले विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिएको छ।
प्रहरीले घटनास्थलबाट शव बरामद गरेको छ। शव जिल्ला अस्पताल मान्ममा राखिएको र त्यसबारे अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ।
कैलालीलाई ०६४ सालकै अवस्थामा फर्काउने प्रचण्डको दाबी
उनले एमालेसँग एकता गर्दा आफूले धेरै चिज बुझेको बताएका छन्। उनदे भने, ‘एमाले के चिज हो ? बुझ्ने मौका पाएको छ। मेरो तीन वर्षको अनुभव भयो र संगै बसेर अनुभव गरे । सबै एक जुट भएर ब्याटल जित्नु पर्ने छ।’
गएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा बैतडीका १० स्थानीय तहमध्ये नेपाली कांग्रेसले ६, एमालेले तीन र माओवादी केन्द्रले एक स्थानीय तहमा विजयी भएको थियो।
सेती अस्पतालको परीक्षणमा थप ३ जनामा कोरोना पुष्टि
पछिल्लो २४ घण्टामा ४२ नमुना परीक्षण गर्दा ३ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलीपकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए। आज धेरै दिनको अन्तरालमा कोरोनाका संक्रमित फेला परेका हुन्।
जसपा सुदूरपश्चिम अध्यक्ष कुन्दनले छाडे पार्टी
जनता समाजवादी पार्टीमा समाहित भएपछि कुन्दन सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष थिए। उनीसँगै जनता समाजवादी पार्टी सुदूरपश्चिमका अन्य नेता कार्यकर्ताहरु पनि माओवादीमा फिर्ता भएका बताइएको छ। उनी माओवादी केन्द्र कैलाली क्षेत्र नम्बर ४ बाट संविधान सभा सदस्य पनि थिए।
नेपाली सेनाद्धारा प्राकृतिक विपद्का घटनाको उद्धार सम्बन्धी डेमो प्रर्दशन
जुनसुकै भूभागमा प्राकृतिक तथा अन्य विपत्तिका घटनाबाट मानिसको उद्धार तथा बेपत्ताको खोजीकार्य, परिचालित हुदा अपनाउने पर्ने सावधानी तथा उद्धारलाई कसरी प्रतिकुल बनाउने भन्ने बिषयमा सो कार्यको डेमो प्रर्दशन गरिएको सह सेनानी महर्जनले बताएका छन् ।
२ हजार बढीलाई एमाले प्रवेश गराउन चैत्र २८ गते ओली बझाङ आउँदै
बृहत् जनसभा तथा पार्टी प्रवेश कार्यक्रमको तयारी तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको छ । उक्त कार्यक्रममा ५ सय स्वयंसेवक खटाउने र ५० हजार जनता उतार्ने प्रयासमा सबै लागिरहेका महरले बताएका छन् । प्रचारप्रसारका लागि नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी सचिव आनन्दलाल विकको संयोजकत्वमा १३ सदस्यीय प्रचारप्रसार उपसमिति गठन गरिएको छ ।
अपमान भयो भन्दै सुदूरपश्चिममा जसपाले तोड्यो गठबन्धन
केन्द्रबाट पाँच दलीय गठबन्धन प्रदेश तथा स्थानीय स्तरमा पनि विस्तार गर्दै अगाडि बढ्ने निर्देशन दिएको थियो । तर, जसपालाई आउट गर्दै अगाडि बढ्न खोजेको जसपा सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष कृष्णकुमार चौधरीले बताएका छन् । यस्तै सुदूरपश्चिममा गठबन्धन नहुने पनि बताएका छन् ।
टाइफाइड रोगको विरुद्ध खोप लगाएजस्तै विकास विरोधी रोक्न भोट अभियान चलाऔं : रोकाया
सही व्यक्ति र विचारले मात्र विकासलाई टेवा पुग्ने र समाजको समृद्धि हुने भएकोले यो चुनावबाटै समाजका केही विकास विरोध तत्वहरुलाई किनारा लगाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् । काँग्रेस नेता समेत रहेका रोकायाले यो चुनावबाट व्यक्तिवादी चरित्र भएका, केही स्वार्थी समूहलाई जुनसुकै पार्टीको भएपनि मतदान मार्फत किनारा लगाउनु पर्ने धारणा राखेका छन् ।
बाजुरामा दललाई उम्मेदवार छान्नै सकस, एउटै पदमा २५ जनासम्मले दिए उम्मेदवारी
बढी संख्यामा काँग्रेस एमाले भित्रबाट उम्मेदवारी परेको देखिएको छ । प्रमुखमा मात्र एउटै पालिका भित्र एक दर्जन बढीको उम्मेदवारी देखिएको छ । योग्यता क्षमता, जनसमर्थन भन्दा पनि महत्वकांक्षा नै धेरै भएकोले उम्मेदवारहरुको संख्या बढी देखिएको छ ।